A BIAPI TUK THAWNGPANG I THANHNAK CIO HNA USIH, CDF NIH THANHNAK ATUAH – The Chinlung Post
CDF nih Hakha Peng ah Zaan sml. 10:00 in Zinglei sml. 5:00 Karlak Lengchuah Lo Ding in Nawl Chuah. CDF nih May 20 thawk in Hakha peng chung ah zaan sml. 10:00 in zinglei sml. 5:00 karlak mipi lengchuah lo ding tu zaan ah nawlchuahnak ca an tar. Curfew caan (zaan sml. 10:00 in zinglei sml. 5:00 karlak ah zualhma mizaw phortu Ambulance pawl lawng lengchuahnak nawl onh nan si lai, tiah an ttial.
Cun, SAC ralhrang nih ralkap motor si loin chungkhar motor hmang in an i chawh caah motor inakalmi/khualatlawngmi mipi nih motor thlalang thlak buin le motor kuang hna muka tibantuk khuh loin khualtlawn ding, tiah an langhter chih. ခရီးသွားပြည်သူများလိုက်နာရန်နှင့် ညမထွက်ရအမိန့် (Curfew)ထုတ်ပြန်ခြင်း အမိန့်အမှတ် (၁/၂၀၂၁)
ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊​ မေလ (၁၁) ရက်, ၁။ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့သည် အရပ်သားကားနှင့် ကုန်တင်ကားများအသုံးပြုပြီး ဟားခါးမြို့နယ်အတွင်း အင်းအားဖြည့်တင်းခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက်ရန်အတွက် နယ်မြေရှင်းလင်းရေးများ လုပ်ဆောင်နေသည်ကို နေ့စဥ်နဲ့အမျှ မျက်ခြေမပြတ် စုံစမ်းသိရှိရသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် ကားဖြင့်ခရီးထွက်ပါက မိုးကာများမအုပ်ရန်နှင့် အမြဲတမ်းကားမှန်များချပြီး မောင်းနှင်ကြပါရန်နှင့် အများပြည်သူလုံခြုံရေးအတွက် ရှောင်တခင် စစ်ဆေးမှုများရှိပါက ရိုသေစွာ ခံယူကြပါရန် သတိပေးအပ်ပါသည်။ ထိုသတိပေးချက်ကို တိကျစွာလိုက်နာခြင်းမရှိပါက အသက်အန္တရာယ် အတွက် အထူးစိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။
၂။ စစ်အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုသည် ဟားခါးမြို့နယ်နေရာအများအပြားတွင် ညအချိန်မတော်မတရား အချိန်တွင် အင်အားဖြည့်တင်းခြင်း၊ မြို့တွင်းလှည့်လည်ခြင်း၊ အိမ်ဖောက်ထွင်းခြင်း၊ မတရားဖမ်းဆီးခြင်း၊ လူမဆန်စွာ ရိုက်နှိပ်သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းများပြုလုပ်နေသောကြောင့် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ မေလ(၂၀)ရက်နေ့မှစပြီး နောက်ထပ် အမိန့်ကြေညာခြင်းမရှိမချင်း ည(၁၀pm)နာရီမှ နံနက်(၅am)နာရီအတွင်း CDF-Hakha သို့ ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံ ထားသော အရေးပေါ်လူနာတင်ကားမှအပ ဟားခါးမြို့နယ်တစ်ခုလုံး သွားလာမှုအားလုံးပိတ်ပင်လိုက်သည်။ Credit: TJC & CDF
Relchih: CDF Hakha nih Loklung khuami sin ah nawlnak le theihternak an tuah mi. A Konglam :Loklung Khuapawng kahdohnak Kongah Nawlpatnak le Theihternak. CDF-Hakha le Ralhrang Kawl Ralkap minung (70) tluk cu Hakha-Gangaw lam in Loklung lei pialnak ah an rak kan tum hnawh caah May 18 zanlei 4pm tluk in May 19 deilei 6am tluk tiang Loklung khuachak ah kan ikap. Cu kahnak cu khuami, Mino bu le Khua nupa hna sin theihter hmasa lo in tuahmiasi lengah Khuami dihlak thinphang thlalau tuk inahimnak lei nan tlik nan zam mi cungah nan kan ngaithiam I na kan theihthiamnak lai kan in nawl hna.
Ralhrangasimi Ralkap cu Mizapi nih kan doh lio cuahmah ah mah pumpak zawnruahnak le miaknak lawng tuak in CDF_Hakha kan cawlcanghnak vialte Ralkap sin ahaphuangmi inntek Loklung khuami nan um sualasi ahcun fakpi in dantatnak kan tuah lai tiah kan in theihter hna. Miphun le ram luatnak ding le damnak ding ah kan zapi rian kan ngei cio ti ruat bu in, Chinland Defense Force_Hakha